Xildhibaan Cabdifitaax Ismaaciil “dalka xaalad qatar ah ayuu ku suganyahay mana badbaadin karaan hogaanka maanta talada haayo” – Kalfadhi
Cabdifitaax Ismaaciil Daahir oo ah Xildhibaan katirsan Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay xaaladda Soomaaliya ee amaanka, siyaasadda iyo dhaqaalaha kadib Wareysi uu siiyay Kalfadhi.
Xildhibaan Cabdifitaax Ismaaciil ayaa sheegay in aysan jirin wax dhaq dhaqaaq oo dalka ka socda islamaraakana ay fadhiid noqotay dowladda Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay waxana uuna ku sababay khilaafka kala dhaxeeya Dowlad Gobaleedyada dalka.
“Ugu yaraan sanad ma jirto wax shaqo ah oo la qabtay dalka dhan lugaha iyo madaxda ayuu isla galay, wax kasta waa adkaadeen waxaana sabab u ah hogaanka talada haaya” ayuu yiri Xildhibaan Cabdifitaax Ismaaciil Daahir oo katirsan Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
“Mar hadii lala heshiin waayay maamuladii shaqo ma socon karto waayo dalka ma ahan Muqdisho oo kaliya waxaana shacabka Soomaaliyeed u cadaatay in aysan shaqo jirin” ayuu yiri Cabdifitaax Ismaaciil Daahir.
Xaaladda amaanka ee magaalada Muqdisho ayuu Xildhibaan Cabdifitaax Ismaaciil ku sheegay in ay tahay mid aan wanaagsaneen oo aysan ka muuqan xoogga la geliyay iyo dhaqaalaha ku baxay. “Muqdisho amni kama jiro dadkiina ciqaab ayaa la geliyay” ayuu u sheegay Kalfadhi Cabdifitaax Ismaaciil Daahir.
“Amaanka Gobalka Banaadir waxaa lagu qaataa lacag badan oo malaayiin doolar ah kamana muuqato lacagtaas, dadkii waa dhiban yihiin walina qatartii waa jirtaa” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan Cabdiftaax Ismaaciil Daahir
“Dhaqaalaha dalka hoos ayuu usii dhacayaa maalinba maalinta ka dambeysa, shaqo abuur ma jirto wax kasta waa hooseeyaan halkii laga sugaayay in ay horumariyaan” ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay Xildhibaan Cabdifitaax Ismaaciil Daahir oo la hadlay Kalfadhi.
Golaha Shacabka oo maanta ka doodaya heshiis caalami ah oo Naafada ku saabsan